[Xog] Maxaa looga hadlay kulankii Midowga & Wakiilka Qatar? - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Maxaa looga hadlay kulankii Midowga & Wakiilka Qatar?
[Xog] Maxaa looga hadlay kulankii Midowga & Wakiilka Qatar?
Hotelka Decale ee u dhaw garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaa xalay ku kulmay xubno ka tirsan Midowga Musharaxiinta mucaaradka ah ee Soomaaliya iyo wafdigii ka socday dowladda Qatar oo dhawaan soo gaaray Soomaaliya.
Wafdigaas waxaa hoggaaminaya Ergeyga Gaarka ah ee Wasaaradda Arrimaha dibadda ee dowladda Qatar Dr. Mutlaq Al-Qahtani, waxaana la sheegay in musharaxiinta ay kala hadleen ismari-waaga ka taagan doorashooyinka Soomaaliya.
Wafdigaan ka socda dowladda Qatar oo sabridii soo gaaray magaalada Muqdisho, kadib safar ka bilaawday magaalada Hargeysa ayaa bilaabay dadaallo ku aadan xal u helidda khilaafka doorasho ee hareeyey Soomaaliya.
Sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen MOL Wakiilka Qatar ayaa sheegay in Dowladda Mareykanka aay ka codsatay in aay xal u raadiyaan arrimaha murugsan ee Soomaaliya wuxuuna wakiilka u sheegay Mucaaradka in ay iyaga ku qasbeen Farmaajo in uu ka noqdo muddo kororsiga.
Midowga musharaxiinta ayaa dowladda Qatar ku eedeeyay in aay masuul ka tahay qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya ka jira, waxayna u sheegeen in Dowladda Qatar aay faraha kala baxdo arrimaha siyaasadda Soomaaliya.
Waxaa dad badani is weydiinayaan sababta uu uga baaqday kulanka Sharif Sheekh Axmed iyadoo la sheegay in uu safar qarsoodi ah uu ku tagay Qatar toddobaadkii hore.
Wakiilka ayaa sidoo kale waxay gooni gooni ula kulmeen guddoonka labada Aqa lee baaralaamka Soomaaliya, iyagoo kala hadlay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan muranka hareeyey doorashooyinka, sidoo kale xoojinta xiriirka labada dowladood ayaa lagu soo hadal qaaday kulamadii dhacay.
Waa kulankii u horeeyey masuuliyiin sare oo ka socda dowladda Qatar iyo midowga musharaxiinta Soomaaliya dhex-mara, waxayna dowladda Qatar dadaal balaaran ugu jirtaa sidii ay beesha caalamka uga dhaadhicin laheyd inay dhex-dhexaad ka tahay xiisada doorasho ee Soomaaliya , isla markaana aysan jirin koox gaar ah oo ay la safantahay.
Muddo dheer dowladda Qatar waxaa lagu xaglinayey inay gacan saar dhow la leedahay madaxda waqtigu ka dhamaaday ee dowladda Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo, balse hadda waxay dadaal ugu jirtaa inay aragtidaas Meesha ka saarto.